Fitsaboana ambonin'ny metaly | Raiso am-pahibemaso ny karazana teknolojia amin'ny fitsaboana any an-tany | PTJ Shop
Home > Services > Fitsaboana ambonin'ny tany
SERVICES NY FITSABOANA NY SURFACE
Raiso am-pahibemaso ireo karazana teknolojia fitsaboana amin'ny endriny ivelany
Inona no atao hoe fitsaboana ambonin'ny tany? Ny fitsaboana amin'ny alalàn'ny tany dia dingana iray amin'ny famolavolana volon-koditra ambonin'ilay tampon'ireo fitaovana fototra izay tsy mitovy amin'ny toetra mekanika, ara-batana ary simika an'ny vatan'ny fototra. Ny tanjon'ny fitsaboana amin'ny alalàn'ny tany dia ny mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanoherana ny harafesina, ny fanoherana ny akanjo, ny haingon-trano na ny asa manokana hafa an'ny vokatra. Ho an'ny fanariana metaly, ny fomba fitsaboana matetika ampiasaina indrindra dia ny fikolokoloana mekanika, ny fitsaboana simika, ny fitsaboana ny hafanana ambonimbony, ny famafazana ny rano ary ny fitsaboana amin'ny alalàn'ny tany dia ny fanadiovana, ny fidiovana, ny fihenan'ny degrease ary ny fidinan'ny faritra ambonin'ilay sangan'asa.
PTJ Shop mamatsy ISO 9001: serivisy fitsaboana metaly voamarina 2015. Anisan'izany ny fitaovana ampiasaina aluminium, varahina, vy, Stainless vy, varahina, manezioma, vy vovoka, volafotsy, titanium & firaka hafa. Cnc Machining Parts amin'ny halavany hatramin'ny 40 ft. Dia mety ho vita.
Ny fahaiza-manao dia misy ny polishing, ny fikosoham-bary ary ny buffing. Famaranana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko haingo na fampiasa toy ny fitotoana vy, fikolokoloana tsipika, famaranana borosy, famonoana, famolahana loko, famaranana ID & OD, famaranana fitaratra, famaranana volo anjely, famaranana Scotchbrite & famitana fidiovana misy. Antsoy izahay!
Fomba fanavahana ny fitsaboana amin'ny endrika ivelany
1.Ny fitsaboana amin'ny masonika mekanika: fipoahana fasika, fanapoahana bala, famolahana, fanodinana, famolahana, fanosorana, famafazana, hosodoko, hosotra, sns.
2. Fitsaboana ambonin'ny tany: manga sy mainty, phosphating, pickling, plastika tsy misy herinaratra metaly sy alloys isan-karazany, fitsaboana TD, fitsaboana QPQ, oxidation simika, sns.
3. Fitsaboana amin'ny alàlan'ny electrochemical: fanodinam-bolo, fanamafisam-peo elektrika, fitrandrahana herinaratra sns.
4. Fitsaboana maoderina: ny setroka etona simika CVD, ny setroka etona ara-batana PVD, ny fatran'ny ion, ny plating ion, ny fitsaboana amin'ny laser, sns.
5. Fihetseham-po amin'ny fanangonam-bokatra: dia manondro ny fizotry ny fampidobohana ampahany vy amin'ny vahaolana passivation pickling mandra-pahatonga ho fotsy sy volafotsy fotsy ny tampon'ny workpiece, izay tsy tsotra ampiasaina fotsiny, fa ambany ihany koa ny vidiny. fanodinana.
6. Fitsaboana poloney electrolytic: Ny teknolojia dia manondro ny polishing electrolytic, fantatra koa amin'ny hoe polishing electrochemical, izay manondro ny dingana iray ametrahana ny sangan'asa amin'ny vahaolana izay omena hery hanatsarana ny fisian'ny haavon'ny metaly miasa sy hamirapiratra azy. Saika ny metaly rehetra dia azo diovina electrolytic, toy ny vy vy, vy karbonika, titanium, firaka aliminioma, firaka varahina, firaka nickel, sns, fa ny vy tsy misy vy no be mpampiasa indrindra. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-mientan'ny onja tsara sy ratsy ary ny vahaolana poloney electrolytic, nohatsaraina ny micro-geometry ny metaly, ary nihena ny hamafin'ny faritry ny vy. Mba hahatratrarana ny tanjon'ny sehatry ny workpiece mamiratra sy malama.
Karazam-pitsaboana mahazatra amin'ny faritra metaly
Hijery antsipirihany >> Hijery antsipirihany >> Hijery antsipirihany >>
Hijery antsipirihany >>